कार्तिक ०१, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
जनकपुरधाम, १ कात्तिक: शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा यस पटक १४ हजार ९९७ बोकाको बलि चढाइएको छ ।
महावीर युवा कमिटीका अनुसार सो मन्दिरमा २०७३ सालमा १४ हजार ६१७ बोकाको बलि चढाइएको थियो । जनकवंशी राजाको कुलदेवी सो मन्दिरमा असत्यमा सत्य, अधर्ममा धर्म, अँध्यारोमा उज्यालो प्राप्ति तथा कार्यसिद्धि र मनोकामना पूर्णताका लागि बोकाको बलि दिने चलन छ । राजदेवीलाई महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महामाया चण्डिका, पार्वती, कौशिकी, जानकी र किशोरी नामले पनि पूजार्चना गर्ने परम्परा छ । अनिकालले गर्दा परेको विकट सङ्कटबाट मुक्तिका लागि राजदेवीको स्थापना गरिएको जनविश्वास पाइन्छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, कार्तिक ०१, २०७५०९:३४
काभ्रेपलान्चोकबाट ३ वर्षमा हराए करीब १५० महिला तथा बालबालिका
३५ लाखमा मुख्य बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका सिसीटिभी क्यामरा प्रयोगविहीन बने
आज देखि भक्तपुरको यस स्थानमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रवेशमा रोक!
घरमा कोही नभएको बेला मौका छोपी रु सात लाखको गरगहना तथा धनमाल चोरी !
मन्त्री अधिकारीको अन्त्येष्टि गृह जिल्लामा हुने, सम्मानको लागि खुलामञ्चमा राखिने !
पहिरोमा परी ठूली तामाङ बेपत्ता
त्रिचन्द्र कलेजकाे १००अाैँ वर्षकाे उपलक्ष्यमा राष्ट्र बैङकले सिक्का निकाल्ने